Xildhibaanada Galmudug oo beeniyey inay mooshin gudbiyeen | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Xildhibaanada Galmudug oo beeniyey inay mooshin gudbiyeen
Xildhibaanada Galmudug oo beeniyey inay mooshin gudbiyeen
Xildhibaanada barlamaanka Galmudug ayaa sheegay in aysan diyaar u ahayn mooshin, iyagoo hadalkaan kaga jawaabayay kadib markii maalmahaan warbaahinta laga tebinayay in mooshin lagasoo gudbiyay guddoomiyaha barlamaanka Galmudug, Maxamed Nuur Gacal.
Hadalkan ayay qaar kamid ah xildhibaanada Galmudug ka sheegeen munaasanad lagu daah furayay kalfadhiga labaad ee barlamaanka Galmudug oo ka furmay Dhuusomareeb.
Guddiga qaban qaabada kalfadhiga ayaa sheegay, in aanay jirin sabab waqtigaan keeni karta in mooshin la keeno, iyagoo sheegay inay guddoonka barlamaanka iyo xukuumada si wacan shaqadooda u gudanayaan.
“Waxaan rabnaa inaan shacabka ka jaahil bixino xanta meelaha ka yeeraysa, diyaarna uma nihin inaan mooshin sameyno, waan ku qanacsanahay wasiiraddeena, madaxweynaheenna iyo guddoomiyaheenna,” ayuu yiri xubin katirsan xildhibaanada qaban qaabaninayay kalfadhiga.
Barlamaanka hadda jira ee Galmudug waa barlamaankii labaad, waxaana xalay u furmay kalfadhigoodii labaad ee dastuuriga ah, waxaana ka qeyb galay madaxweynaha Galmudug iyo guddoomiyaha aqalka sare.
Maqaal horeMaxaa hortaagan magacaabidda ra’iisul wasaare cusub?
Maqaal XigaWebiga Shabelle oo fatahaad hor leh ka geystay magaalada Beledweyne